China Multifunctional High Inqwaba Knitting Machine Ukwakha futhi Factory | Imishini kaMorton
Ngabe ufuna ukuthola ukukhiqizwa komshini womshini wokunitha we-Multifunctional High Pile Knitting wemfuno yakho ethile yendwangu?
Singanikela nge-Higher Precision Multifunctional High Pile Knitting Machine ukufanisa isidingo sakho kangcono.
MT - E- HP
I-1.Multifunctional High Pile Knitting Machine Usebenzisa indiza ye-aluminium alloy engxenyeni enkulu yomshini ukwenza ngcono ukushabalalisa ukusebenza kokushisa nokunciphisa ukusonteka kwamandla kwebhokisi le-cam.
Ukulungiswa kwe-2.One Stitch ukufaka esikhundleni sephutha elibukhali leso lomuntu ngokunemba kwemishini, futhi isibonisi esinembile sokulungiswa ngokulungiswa okuphezulu kwe-Archimedean kwenza inqubo yokuphindaphindeka kwendwangu efanayo kumishini ehlukene ibe lula futhi ibe lula.
3.Multifunctional High Inqwaba Ukwaluka Machine obizwa nangokuthi Amatebhe loop iluphu ukunitha umshini.
Umklamo we-4 ikakhulukazi wamakhamera izinaliti nemimese, okulula ukulungisa umshini, kungaxazulula inkinga yendabuko efana nomkhawulo wobude be-loop, i-assort embi yezinqwaba eziphakeme neziphansi, ubukhulu obungenasilinganiso, umphumela omubi wokumisa. Indwangu eyehlisiwe ngomshini ofanayo ingathola ukuphakama okuhlukile kwe-loop.
Lo mshini ukuhlanganiswa kwemishini yokusebenza, i-dynamics, i-textile principle kanye ne-ergonomics design.
I-6.Multifunctional High Pile Knitting Machine ifakwa njengokubukeka okuhle, isakhiwo esikahle futhi esisebenzayo.
7.Usebenzisa imboni efanayo ephezulu izinto zokwakha nokungeniswa kwe-CNC machining, ukwenza isiqiniseko sezinto zokusebenza nezidingo zendwangu.
Ubuchwepheshe bokuqala basekhaya bokuqala obethulwe busuka eKorea bungenayo indwangu nokungena ngaphakathi. Inonxantathu oyingqayizivele owakhiwe ngommese wenaliti. Kungavimba ngempumelelo izinkinga eziningi zendabuko ukuze indwangu evundlile nebheke phezulu, izinwele ezingalingani kanye nokwehlukaniswa kwamabala.
Lo mshini usebenza ezintweni ezilukiwe njengochungechunge lwamakhemikhali kasilika, uchungechunge, intambo yoboya emsulwa kanye nefayibha enhle kakhulu. Ingakwazi ukuluka zonke izinhlobo ze-cashmere yaseKorea, njenge-coral cashmere, i-carp cashmere, i-Kirin cashmere, i-velveteen, i-sunflower cashmere, i-Peacock cashmere, i-bubble cashmere, i-cotton cashmere / i-fur cashmere, i-PV yoboya, i-South Korea cashmere, uboya bewundlu, i-super-soft ikheshi kanye noboya emuva. Zisetshenziselwa okokugqoka, ulwelwesi, okombhede, amathoyizi, indwangu yeSofa, ukhaphethi, ingubo yokulala kanye nesigqiki semoto. Izindwangu zingahlangabezana nezidingo eziphuthumayo zemakethe ngenhloso eyisicaba nebanzi!
Langaphambilini Ubambo Isiyingi Ukwaluka Machine
Olandelayo: Lower Loop Sika Vula Ububanzi Jacquard Machine